Religious Archives - Amawpyay
ဝဋျ‌ကွှေး ၁၉ ခကျြအ‌ကွောငျး သိကောငျးစရာမြား
ဝဋျ‌ကွှေး ၁၉ ခကျြအ‌ကွောငျး သိကောငျးစရာမြား ၁. ဒီဘဝမှာ လကျဝတျရတနာမြား နှငျ့ အဝတျကောငျးမြား ဝတျဆငျနိုငျခွငျးဟာ အရငျဘဝက သငျဟာ ဘုနျးတျောကွီးမြားကို သင်ျကနျးကပျလှုခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။ ၂. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အစားအသောကျကောငျးမြားဖွငျ့‌ နရေပါသလဲ ဆိုတော့ အရငျဘဝက မရှိဆငျးရဲသားတှကေို ပေးကမျးလှုဒါနျးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ ၃. ဘာဖွဈလို့ ဒီဘဝမှာ ဆငျးရဲပွီး အဝတျကောငျးတှေ မဝတျနိုငျရသလဲဆိုတော့ အရငျဘဝက သငျဟာ ကပျစေးနှဲ ကျောတရာဖွဈပွီး အလှုမလုပျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ ၄. ဒီဘဝမှာ ကိုယျပိုငျတိုကျကွီး ခွံကွီးမြားနှငျ့ နနေိုငျခွငျးဟာ အရငျဘဝက ဘုနျးကွီးကြောငျးတှမှော ဆနျအလှုပေးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ ၅. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ တိုးတကျအောငျမွငျပွီး‌ …
စိတျညဈစရာ ပွဿနာဒုက်ခတှကွေုံတှေ့ လာတိုငျးကုသိုလျ တဈခုခုအမွဲပွုပါ ထူးခွားပါလိမျ့မညျ ဒီနတေ့ော့စမယျ့ ဒုက်ခကွုံတိုငျး ကုသိုလျတဈခု လုပျပါဆိုတဲ့ ဒီ Post လေးကို စာပခေဈြသူတှေ အကြိုးရှိမယျ ထငျလို့ အရှငျဇဝန account မှ ပေးပို့လာတဲ့ ဒီစာလေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျ ပါတယျနျော… တဈနေ့ သောအခါ ဆရာတျော ဦးဗုဓျ၏ မယျတျောကွီးသညျ မိမိ နအေိမျ မီးလောငျသှားသော ကွောငျ့သာ ဦးဇငျးထံသို့ ပွေးလာပါတယျ။ သူ့ခဗြာ မုဆိုးမကွီး ဆိုတော့ အားကိုးလဲ မရှိရှာပါဘူး။ အဲဒိအတှကျ သားဦးဇငျး ထံ အားကိုး တကွီး နဲ့ ပွေး လာတာ ပါ ။ အဲဒိ အခြိနျမှာ …
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သိသင့်သိထိုက်သော အခြေခံ၊အတိုချုပ်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သိသင့်သိထိုက်သော အခြေခံ၊အတိုချုပ် ကလေးငယ်တွေက ပဲမေးမေး ၊ဘာသာခြားတွေ က ပဲမေးမေး ၊ ဘယ်သူမေးမေးဗုဒ္ဓဘာသာ အခြေခံ ၊အတိုချုပ် လောက်တော့ဖြေနိုင် ရမယ်၊ သိထား သင့်တယ်။ အဲဒီလို ဖြေနိုင်အောင် သိရအောင်လို့ ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိသင့်သော သိမှတ် ဖွယ်ရာများ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗုဒ္ဓ = မြတ်စွာဘုရား ၊ဘာသာ = အယူ သာသနာတော် အဆုံးအမကို လိုက်နာကျင့်သုံး လက္ခဏာရေးသုံးပါး အနိစ္စ = မမြဲခြင်း ၊ ဒုက္ခ = ဆင်းရဲခြင်း ၊အနတ္တ = အစိုးမရခြင်း ဘဒ္ဒကမ္ဘာတွင် ပွင့်တော်မူသော ဘုရားငါးဆူ ၁။ …
“ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားများခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ” နေ့စဉ်နေ့စဉ် ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါးကို ပွားများရတယ်။ အဲဒီလို ဘုရားဂုဏ်တော်တွေ ပွားများရင် ဘုရားဓာတ်တွေ တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ် ဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းလာတယ်။ အဲဒီလိုဘုရားဓာတ်တွေ ကိန်းတော့ ဘုရားရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်းကူးလာတယ် ဘုန်းဘုန်းတို့ နှစ်သစ်အချိန်အခါက ကာလ တစ်နှစ်ပြောင်းသွားတော့ သိပ္ပံနည်းအရ နေက ဟိုးဒက္ခိဏ အရပ်ကနေ တဖြည်းဖြည်း ရပ်ပြီးတော့ ဒီဘက်ပြန်ပြောင်းလာတာကို နှစ်သစ်လို့ခေါ်တာပေါ့။ ကမ္ဘာကြီးက နေကို ပတ်လှည့်နေတာ။ အဲဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတွေ၊ နတ်တွေ၊ ဗြဟ္မာတွေ၊ သစ်ပင်တောတောင် ရေမြေတွေလည်း ဥတုအလိုက် နေရဲ့အပူရှိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ ပြောင်းကြတယ်။ အဲဒီလိုပြောင်းသလို သက်ရှိသတ္တဝါတွေက ဘာပြောင်းရလဲဆိုတော့ အကောင်းဆုံးက နှစ်သစ်မှာဘုရားဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ် မေတ္တာပွားတာ …
ပဋ္ဌာန်းမပူဇော်မှီ အဓိဋ္ဌာန် သစ္စာပြုနည်း
ပဋ္ဌာန်းမပူဇော်မှီ အဓိဋ္ဌာန် သစ္စာပြုနည်း ပဋ္ဌာန်း မပူဇော်မှီ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းတွေ အကြောင်းကိုိ သိထားမှ ရွတ်ဆိုတဲ့ အခါ နေရာကျမှာဖြစ် ပါတယ်။ မသိထား ရင်တော့ နေရာကျ စရာ အကြောင်းမရှိပါ။ နေရာကျကျ အစီစဉ် ကျကျရွတ်ဆို ပါမှ အကျိုးထူး အကျိုးမြတ်များကို ခံစား ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ပဋ္ဌာန်းမရွတ်ဆိုမီ အဓိဋ္ဌာန်ပုံနှင့် သစ္စာဆို ရပုံလေးကို ရှေးဦးစွာ ရေးသား လိုက်ခြင် ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ယနေ့မှ စ၍ နေ့စဉ်မပြတ် တစ်လတိတိ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာ တော်များ ရွတ်ဆိုပြီး မြတ်စွာ ဘုရားကို ပူဇော်ပါမည်ဟု အဓိဋ္ဌာန် ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ …
နံနက်ခင်း အိပ်ယာထပြီးနောက် မျက်နှာသစ်တိုင်း နေ့စဉ် ရွတ်ဖတ် ရမည့် မျက်နှာသစ်ရာ ရွတ်ကြပါ မျက်နှာ သစ်ရာ ရွတ်ကြပါ။ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယမ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဒုတိယမ္မိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဒုတိယမ္မိ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ တတိယမ္မိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ တတိယမ္မိ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ တတိယမ္မိ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သရဏဂုံတင် ပြီးပါက မိမိချစ်သူခင်သူ များကို မေတ္တာပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်အား မွေးထုတ်ပေး …
“ကံကောင်းချင်ရင် စိတ်ကောင်းကောင်းထားပါ ဘုရားရှိခိုးဖို့လည်း မပျင်းကြပါနဲ့”
ကံကောင်းချင်ရင် ဘုရားရှိခိုးဖို့ မပျင်းပါနဲ့ ဘုရားရှိခိုး မပျင်းနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတဲ့ အလုပ် မဟုတ်ဘူး တစ်နေ့လုံးသုံးဖို့ စိတ်တန်ခိုး ထုတ်လုပ်တာ စိတ် ဓါတ်ဆီ ထည့်တာ စိတ် စက်ဆီ ဖြည့်တာ။ သန့်စင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်အောင် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရေနဲ့ ဆေးတယ်လို့မှတ် စက်ကရိယာတွေကို ဆေးကြောသန့်စင်တယ်လို့ စိတ်ထဲ မှာ နှလုံးသွင်း ထား။ ဘုရားရှိခိုး တာ ဘုရား ဂုဏ်တော် ပွားတာ မေတ္တာပို့ တာ ထွက်လေဝင်လေ စူးစိုက်ပြီးမှ ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ် တရားထိုင် တာဟာ ကျန်းမာရေး လဲရ စိတ်ခွန်အား လဲကောင်း စိတ်ကြံခိုင်ရေး လဲ တိုးတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ …